FAA na-enye ndụmọdụ maka njem maka Venezuela
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » FAA na-enye ndụmọdụ maka njem maka Venezuela
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ na -agbasa na Venezuela
Nwere ike 1, 2019
United States Federal Aviation Administration (FAA) enyela ndụmọdụ maka njem maka ókèala na ikuku nke Venezuela n'ihi ụba ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na esemokwu na Venezuela na ikike ndị metụtara ya ihe ize ndụ maka ọrụ ụgbọ elu.
Nke a na-emetụta ndị ọrụ ụgbọelu US na ndị ọrụ azụmaahịa. Notam amachibidoghị ndị mmadụ ịrụ ọrụ ụgbọ elu na Venezuela ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọzọ nke gọọmentị US nyere ikike ịrụ ọrụ ma ọ bụ jiri nkwenye nke FAA.
Ndị mmadụ nọ na mbara ikuku nke Venezuela site na oge Notam a nwere awa 48 iji chọpụta ma enwere ike ịrụ ọrụ ha n'enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ihe mberede chọrọ mkpebi na ihe ngwa ngwa maka nchekwa nke ụgbọ elu ahụ mere, onye na-anya ụgbọelu nke ụgbọelu ahụ nwere ike ịdapụ na Notam a ruo oke nke ihe mberede ahụ chọrọ.
ndị na-ebu azụmahịa mkpebi n'ihi mberede FAA gọọmenti etiti Federal Aviation Administration arụmọrụ ụgbọ elu awa na-amụba nsogbu nyere mbipụta nyochaa arụmọrụ ndị ọrụ mmadụ pilot ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ize ndụ Safety na-ekwu, esemokwu United States ndụmọdụ ndụmọdụ United States Ikuku US US ochichi Venezuela